Ahoana No Nahavitan’ny Mpampiana-Tena Iray Ho Mpandika Lahatsoratra Sanganasa Ara-Literatiora Iray Amin’ny Voambolana Iray Anatin’ny Fotoana Iray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Mey 2016 6:06 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Ελληνικά, Deutsch, Italiano, Français, srpski, नेपाली, عربي, Português, Türkçe, English
Deborah Smith. Dikasary avy amin'ny lahatsary YouTube ARIRANG NEWS.
Lahatsoratra nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 18 mey 2016 ary nivoaka eto indray ao anatin'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Nivoaka tamin'ity herinandro ity ny Loka Iraisampirenena Man Booker ho an'ny tantara foronina, ary ilay Koreana Tatsimo Han Kang no nahazo ny peratra varahina tamin'ny tantara noforoniny “Ilay Vezetariana.”
Miresaka vehivavy iray mino fa nivadika ho hazo izy. Ny tsikera milaza ny tantara ho “feno fihetsehampo sady mandrovitra fanahy.” Manaitaitra filàna ihany koa ilay izy.
Saingy tsy ny momba ny boky no resahin'ny olona maro. Fa ilay mpandika lahatsoratra.
Vao enintaona monja izao no nianaran'i Deborah Smith, ilay Britanika 28 taona nahavita ity sanganasan-tantara foronina ity ho amin'ny teny anglisy. Ka ahoana no nahavitany nandika ity boky ity ho tsara dia tsara?
“Raha manontany tsiambaratelo ianao dia miala tsiny aho fa tsy mahay na inona na inona tahaka anao aho,” hoy izy. “Raha mitodika aho ankehitriny dia mahatsiaro ny tsy maintsy nijereko ny voambolana saika tsirairay tao amin'ny rakibolana. Mety ho teny tafahoatra angamba izany, saingy izany no tsapako tamin'izany fotoana. Tahaka ny hoe mihanika tendrombohitra izany.”
Nolazainy fa toy ny fanomezana ny mahavaovao azy amin'ny fiteny koreana. “Fantatro tsara fa mila manamarina indroa ny zava-drehetra aho ary mila mitandrina dia mitandrina tsara,” hoy izy. “Tsy maintsy manontany am-pisalasalana ny dikantenin'ny voambolana sasany ihany koa aho.”
Fanampin'izany, tsy mahomby tsara matetika ny fandikana mivantana amin'ny literatiora. “Satria tsy midika ilay teny tiany lazaina ny fandikana isan-teny raha mikendry ny isian'ny fiantraikany eo amin'ny literatiora ianao,” hoy ravehivavy.
Nisy namana Koreana ihany koa nanampy an'i Smith. Nilaza i Smith fa nandidy ny hanaovana fanontaniana mankaleo momba io namana io izy, izay mpiara-mianatra programa PhD. (Ho takalon'ny fanampiana amin'ny fandikanteny, dia te-hampamaky ny fampianarana rehetra nataon'ilay namana i Smith.)
I Deborah Smith sy i Han Kang. Dikasary avy amin'ny lahatsary YouTube ARIRANG NEWS.
Mety ny firindran'ny teny anglisin'ny boky, saingy tafita tamin'ny adina sarotra kokoa ihany koa: Milaza i Smith fa tsy afa-miteny ny olona izay sady maila-piteny anglisy no maila-piteny koreana fa tsy olona teratany no nanao ny dikanteny. “Tsy nisy ny naneho hevitra momba izany rehefa avy namaky azy,” hoy ravehivavy. “Tsy maintsy avy amin'ny fantsona hafa no nandrenesan'ny olona ny tantarako momba azy ity. Saingy ny tanjaky ny fandikanteny sy ny fahakingana amin'ny fandikanteny literera no hahalalanao tsara ny fiteny nokendrena (dindo), fa tsy ny fahalalanao tsara ny fiteny nakanao (poitra) azy.”
Ny lakileny, araka an'i Smith, dia ny fahalalanao ny teny anglisy sy ny fomba ampiasaina azy hamoronana indray ny endrika sy ny feon'ny tantara noforonina koreana. Fa amin'izany talenta izany dia efa mihoatra lavitra noho ny takiana ny ananany. Mahavita vakiboky 200 izy ao anatin'ny taona. “Ary nahavita izany aho araka ny tsaroako,” hoy ravehivavy. “Ka tamin'ny farany aho dia efa natoky tsara.”
Tsy mitovy amin'ny boky hafa novakian'i Smith “Ilay Vezetariana”, ary nanatona mpamoaka boky izy tamin'ny 2013 amin'ny hanaovana dikanteny. “Mihevitra aho fa iray amin'ireo boky ahitanao tokoa izay mampientanentana amin'ny literatiora koreana amin'izao fotoana izao ity boky ity. Manana fiavahany avy amin'ny [literatioran'ny] firenenkafa izy io,” hoy ny filazany.
Ary izany no antony nisafidianany handray tetikasa amin'ny fiteny izay tsy voafehiny tsara. “Mieritreritra aho fa izany no tombony iray amin'ny fandikandahatsoratra, mampisy zavatra iray amin'ny fiteny na kolontsaina izay vaovao ary tsy mbola nisy teo aloha.”
Andramo jerena ato ny tsonga avy amin’ “Ilay Vezetariana”: